Amazon.it: Mokshabhumi - Dahal, Keshab - Libri
28,78 €28,78 € () Include le opzioni selezionate. Include il pagamento mensile inizialeele opzioni selezionate. Dettagli
Prezzo (28,78 €x)
28,78 €28,78 €
Mokshabhumi Copertina flessibile –6ottobre 2020
Edizione Nepalese di Keshab Dahal (Autore)
4 Nuovo da 26,53 €
यो आजभन्दा सयौँ वर्षअगाडिको कथा हो । जतिखेर धरतीको रङ र सुगन्ध अर्कै थियो । ठाउँठाउँमा शिशुबलि हुन्थ्यो । नरबलि हुन्थ्यो । तन्त्रमन्त्रहरूको साधना हुन्थ्यो । सामन्त, सम्राट्, राजा, महाराजाहरू थिए । दासहरू थिए, दासशालाहरू थिए । आर्यवर्तमा आधुनिक मानव सभ्यताले भर्खरै पालुवा हाल्दै थियो । त्यो परिपक्व र मधुर थिएन । बाहिरबाट हेर्दा सबै शान्त देखिन्थ्यो । तर भित्र थियो, उथलपुथल । कष्टको पिँजडाबाहिर आउन मान्छेहरूमा तिव्र छटपटी थियो । तिनै कष्टहरूको जन्जिरबाट फुत्किएका दासहरूको कथा हो - मोक्षभूमि ।
14 x 2.13 x 21.59 cm
Editore ‏ : ‎ Kitab Publishers (6 ottobre 2020)
ISBN-10 ‏ : ‎ 9937076897
ISBN-13 ‏ : ‎ 978-9937076890
Dimensioni ‏ : ‎ 14 x 2.13 x 21.59 cm